UNWTO: Nyanzvi dzekushanya kuti vakurukure nzvimbo dzemakomo dzekugamuchira vaeni mhando muAndorra
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » UNWTO: Nyanzvi dzekushanya kuti vakurukure nzvimbo dzemakomo dzekugamuchira vaeni mhando muAndorra
Andorra Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Sports • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Chinyorwa chegumi cheWorld Congress pamusoro peChando neMakomo Tourism chichaitika kubva musi wa 10 kusvika 21 Kurume 23 muAndorra, pasi pezita rekuti "Kuumba Ramangwana Rekugamuchira Vaeni muMakomo Ekuenda". Iyo Congress yakarongeka neWorld Tourism Organisation (UNWTO), Hurumende yeAndorra neCommune yeEscaldes-Engordany. Chiitiko ichi, icho chinoitwa makore maviri ega ega, chiri kupemberera kusvitsa makore makumi maviri gore rino.
Musangano uyu unounza pamwechete vakasiyana siyana vevashandi vekushanya, kubva kumaneja enzvimbo dzekushanya kwemakomo kusvika kune vezvemabhizimusi munzvimbo yekugara.
Ichi chinyorwa chichaita makumi matatu evatauri vekunze uye ichavhurwa naAntoni Martí, Musoro weHurumende yeAndorra, Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General, naTrini Marín, Meya weEscaldes-Engordany.
Pfungwa nyowani yekugamuchira vaeni
Munguva yeCongress, vatori vechikamu vachataura misoro yakadai sekumisikidzwa kwenzvimbo dzekushanyirwa, zvinetswa zvekugamuchira vaeni, kukanganisa kwenzvimbo nyowani dzekushanyirwa mabasa kana izvo zvinonzi kugovana hupfumi, huchenjeri hwekunyepedzera, uye kudzidziswa sezvinhu zvakakosha pakubudirira kwenzvimbo.
Chiitiko ichi chichave chakarongedzwa muzvikamu zvitanhatu, zvichaitwa musi wa21 na22 Kurume kuAndorra la Vella Congress Center. NeChishanu, 23 Kurume, kushanya kwehunyanzvi kuchasanganisira kushanya kwenzvimbo nyowani dzeActuaTech muCaldea-Inúu, pamwe nezviitiko zvakasiyana zvevaraidzo.
World Congress pamusoro peChando neMakomo Tourism
World Congress pamusoro peChando neMakomo Tourism yakazvarwa sechirongwa cheUNWTO, Hurumende yeAndorra nematare manomwe eAndorra, nechinangwa chekuumba foramu yekusingaperi yekukurukurirana kwekusimudzira nekusimudzira kwekushanya munzvimbo dzemakomo. Inobatwa makore maviri ega ega.